ES Explorer ကို File | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ES File ကို Explorer ကို
ES File ကို Explorer ကို APK ကို
အခမဲ့, ကို Safe, ရိုးရှင်းသော, ES File ကို Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က) နဲ့ထိထိရောက်ရောက်နဲ့အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုစီမံ!
ES Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို) File ပြည်တွင်းနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်နှစ်ဦးစလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက် full-featured ဖိုင် (ပုံများ, Audio, ဗီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများ, အက်ပ်) မန်နေဂျာပါ! ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 500 ကျော်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ, ES File ကို Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က) သင့် android ဖုန်းနှင့် files တွေကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဒေတာများကုန်ကျစရိတ်မလိုဘဲဖိုင်တွေဝေမျှကူညီပေးသည်။file ကိုမန်နေဂျာနှင့် Folder ကို Manager က - အစွမ်းထက် tools တွေကိုသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ desktop ကိုတန်း features တွေထား
•ပေးပို့သူ: လွှဲပြောင်း apps များ, ပုံများ, audio, ရုပ်ရှင်များ, စာရွက်စာတမ်းများ, မိုဘိုင်းဒေတာများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးမသုံးဘဲ။ အတူတူက Wi-Fi မုဒ် & Auto-created ဟော့စပေါ့ကိုထောကျပံ့။
•ဖိုင်မန်နေဂျာ: ဖြတ်, မိတ္တူ, ငါးပိနှင့်သင်၏ဖိုင်များကိုစီမံအမည်ပြောင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးချုံ့
• Built-in အမျိုးမျိုးသောဖိုင်အမျိုးအစားများများအတွက်ကြည့်ရှုနှင့်ကစားသမား: ဂီတ / ဗီဒီယိုများ, စစ်ဆေးမှုများပုံရိပ် (s) နှင့်စာရွက်စာတမ်း (s) ကိုကစားရန်ကလစ်နှိပ်ပါ
• Built-in ZIP ဖိုင်နဲ့ RAR ထောက်ခံမှု: သင်ချုံ့နှင့် ZIP ဖိုင်ဖိုင်တွေ decompress, RAR ဖိုင်တွေအထုပ်များနှင့် encrypt လုပ်ထားတဲ့ (AES 256 bit) ZIP ဖိုင်ဖိုင်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်ဝေးလံခေါင်သီဖိုင်မှတ်တမ်း Access ကို - ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှသင်၏ဖိုင်များကို Get
• Cloud သိုလှောင်မှု: Dropbox ကို, Box.net, SugarSync, Google Drive ကို, OneDrive (SkyDrive ကို), အမေဇုံ S3, Yandex နှင့်ပိုပြီးမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့
• Remote File Manager: ဤအင်္ဂါရပ် enabled သောအခါ, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဖိုင်တွေစီမံနိုင်သည်
•တစ်ဦး FTP နှင့် WebDAV client ကဲ့သို့ Functions များ: သင်သည်သင်၏ SD ကဒ်ပေါ်မှာဖိုင်တွေစီမံခန့်ခွဲရုံများကဲ့သို့ FTP, FTPS, SFTP နှင့် WebDAV server များပေါ်တွင်ဖိုင်များကိုစီမံ
• Access ကိုသင့်အိမ်ရဲ့ PC: သင်၏စမတ်ဖုန်းမှတဆင့် Wi-Fi ကနေတစ်ဆင့် SMB နှင့်အတူfile transfer နှင့်ဖိုင်မှတ်တမ်း Explorer ကို
• Root Explorer ကို: အမြစ်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools များ၏အန္တိမထား။ တစ်ခုလုံးကိုဖိုင်စနစ်နှင့်ဒေတာအားလုံးကို directory များဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်, ထိုအသုံးပြုသူခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။
•ဘလူးတုသ်ဖိုင်ကို browser ကို: သင်ကဘလူးတုသ်-အဆင်သင့် device များအကြားဖိုင်များကိုကော်ပီကူးခြင်းနှင့် paste နိုင်ပါတယ်။ ES Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို) File devices များ browsing နဲ့ Bluetooth devices များအကြားဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းဘို့ OBEX FTP ကိုထောကျပံ့
•က Wi-Fi ကိုဖိုင်မှတ်တမ်းလွှဲပြောင်း: ကြိုးမဲ့ FTP သုံးသင့်မိုဘိုင်းဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ရန်သင့် PC ကိုသုံးပါ
စာကြည့်တိုက်နှင့်အခြား - စက္ကန့်အတွင်းမဆိုနှင့်တိုင်း file ကိုရှာပါ
• App ကို Manager က: အမျိုးအစားသတ်မှတ်ဖယ်ရှားရန်, ကို back up, သင်၏ apps များမှ shortcuts တွေကိုဖန်တီး
• SD ကတ် Analyst,: အာကာသကယ်တင်ကူညီရန် Files & redundancy Files & မိတ္တူပွားဖိုင်များ Created App ကိုတွဲဘက် Folder ကို & မကြာသေးမီကအကြီးစား Files & များအတွက် Analyze; ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ apps များသိရန် Sensitive ခွင့်ပြုချက် & App ကိုကက်ရှ် & မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု detect
•, တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူတာဝန်များကိုသတ်မှတ်ဉာဏ်တိုးပွားစေနှင့်သင့် device ကိုအရှိန်မြှင့်: သင်ချင်သော applications များလျစ်လျူရှုဖို့ကိုလျစ်လျူရှုစာရင်းနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏လက်ရှိ RAM ကိုအခွအေနေကိုသိရန်နှင့်အလိုအလြောကျတာဝန်များကိုကိုသတ်စေသင့်အိမ် screen ပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ widget ကပါဝင်သည် running စောင့်ရှောက်လော့။ အဆိုပါ Task Manager ကို module ကိုဤအင်္ဂါလိုအပ်ပါသည်။
• Cache Cleaner နှင့် auto-စတင် Manager ကို: တန်ဖိုးရှိသောသိုလှောင်ရန်နေရာတက်ယူကြောင်း Junk ဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါ။ အဆိုပါ Task Manager ကို module ကိုဤအင်္ဂါလိုအပ်ပါသည်။
•စမတ်တာဝန်ခံ: အားသွင်းတဲ့အခါမှာ screen ပေါ်မှာ SD ကဒ်အခြေအနေ, Real-time အသစ်သောဖိုင်များကိုပြသရန်
•အချိန်နှင့်တပြေးညီ Observer: ပိုမြန်စာကြည့်တိုက် 80% အတွက်အကူအညီဝန်မကြာသေးမီကဆက်ပြောသည်ဖိုင်တွေ
ES Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို) သင်သူတို့သည်သင်၏ device ကိုရဲ့ memory, MicroSD card ကိုဒေသခံဧရိယာကွန်ရက်နဲ့ cloud storage ကို accounts.By က default ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်ရှိမရှိအားလုံးသင်၏ဖိုင်များကိုကိုင်တွယ်ကူညီပေးသည်, ES File ကို Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို) သင်ကူးယူခွင့်ပြု, ပြောင်းရွှေ့ File , သင့်သိုလှောင်မှုဆိုရန်နှင့်ထံမှ delete သို့မဟုတ်ရှယ်ယာဖိုင်များ, ကိုအမည်ပြောင်း။ ဒါဟာအစငျသညျအမျိုးအစားအလိုက်သင့်ဖိုင်များ browse နှင့်ရယူပေးနိုင်ပါတယ်။
1 ။ Fixed ဂီတကစားသမား Display ကိုပြဿနာ
2 ။ app ကိုအရွယ်အစားပိုကောင်းအောင်
3 ။ bug fixed
သင်ဆဲယုံကြည်တယ်မဟုတ်ဆိုရင်ဒီ app ကိုဒီဗီဒီယိုကိုထုတ်စစ်ဆေးထွက်ရှိထိပ်တန်းဦးဆောင်အသုံးဝင်သော apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
12.29 ကို MB
ဘလူးတုသ် file ကိုမန်နေဂျာများ ဝိုင်ဖိုင်
Shivraj Tupe says:
ဇူလိုင်လ 1, 2019 မှာ 5: 10 နံနက်
ဇွန်လ 18, 2019 မှာ 6: 36 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 6, 2018 မှာ 1: 21 ညနေ
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသိုလှောင်မှုကြောင့်ဂီတ 3gb ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းခဲ့ကြသည်စားသုံးကွောငျးဖျောပွသထွက်အပြေးနေသည်ဦးယောက်ျားတွေဒီ prob fix ဤအကူအညီမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမဂီတ help.will နိုင်ပါတယ်ရှိသည်ဟု ???
နိုဝင်ဘာလ 20, 2018 မှာ 11: 12 ညနေ
ဒီ app ကိုသုံးပါ
ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် App ကိုမန်နေဂျာကိုသွား
နှင့်စာရင်းအားလုံးပွင့်လင်း apps များပြသ
နှင့်အပြေးအပေါ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် apps များမလိုအပ်ပိတ်ဖို့
Sivan ဟူး says:
မတ်လ 27, 2018 မှာ 12: 13 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 28, 2017 မှာ 11: 13 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 မှာ 9: 17 ညနေ
ဇွန်လ 7, 2017 မှာ 12: 41 ညနေ
မတ်လ 23, 2017 မှာ 9: 33 ညနေ
ဒါကဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် number1 ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ wont တကြိုးစားနေပြီးနောက်အခြားသူတွေကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအစအထဲမှာအခမဲ့အသုံးဝင်သောသန့်ရှင်းရေးကိရိယာတခုရှိပါတယ်။
ဧပြီလ 1, 2017 မှာ 8: 39 ညနေ
သင်ဤဖိုင်အမျိုးအစားကိုကိုင်တွယ်ရန် apk ရှိသည်မဟုတ်ဖျောပွထားသညျငါ့ကိုကူညီပါ
ဧပြီလ 22, 2017 မှာ 12: 10 နံနက်
တစ်ခါတုန်းက app ကိုယင်း၏ကောင်းသောများ
နိုဝင်ဘာလ 22, 2016 မှာ 10: 06 နံနက်
wow..the အကောင်းဆုံးများထဲမှ ..
နိုဝင်ဘာလ 6, 2016 မှာ 10: 25 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 21, 2016 မှာ 9: 29 နံနက်
ကိုယ့်ဖုန်းကိုရှိအကောင်းဆုံး app ကို။
စက်တင်ဘာလ 22, 2016 မှာ 7: 12 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 22, 2016 မှာ 7: 10 ညနေ
TS အကြီးအ soooooooooooooo ။ အဘယ်သူမျှမ app ကိုအစဉ်အဆက်ကဤကဲ့သို့ငါ့ကိုဒါပျော်ရွှင်စေတော်မူပြီ။ Thanx
သြဂုတ်လ 18, 2016 မှာ 11: 24 ညနေ
ငါတကယ်က၎င်း၏ဒါအထောက်အကူမပြုမီတခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူးဂရိတ် app ကို
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2017 မှာ 8: 38 နံနက်
ဇူလိုင်လ 13, 2016 မှာ 8: 47 ညနေ
ဇွန်လ 29, 2016 မှာ 9: 43 နံနက်
ကိုယ်ကဒီ app ကို likes
Aubrey ဂရေဟမ် says:
စက်တင်ဘာလ 5, 2016 မှာ 12: 07 နံနက်
lol ဒီ app likes
Jin က says:
ဧပြီလ 23, 2016 မှာ 11: 06 နံနက်
android ဖုန်း 5.1 အပေါ်ဿုံအလုပ်မလုပ်
ဧပြီလ 18, 2016 မှာ 8: 20 ညနေ
ဤသူသည်သင်တို့ GTA ကစားရန်ဇစ်ဖိုင်များကို extract နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောရှာဖွေသူဖြစ်ပါသည်
ဧပြီလ 9, 2016 မှာ 5: 13 နံနက်
ငါ .. ဒီ website ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက app များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ကောင်းပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ဒီ appe ငါ၏အအမြစ်ဖိုင်တွေသိမ်းပြီးအတွက်မရှိမဖြစ်
ဇူလိုင်လ 9, 2017 မှာ 12: 10 ညနေ
အဘယ်ကြောင့်အမြစ်ဖိုင် archieve သင့်သလဲ ဦးပထမဦးဆုံး ur ဖုန်းကို root ဖို့ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးကကျေးဇူးပြုပြီးလေ့လာသွားပါ။